Rivo Rakotovao : Miasa matoa mitokana fa tsy propagandy akory -
AccueilSongandinaRivo Rakotovao : Miasa matoa mitokana fa tsy propagandy akory
Rivo Rakotovao : Miasa matoa mitokana fa tsy propagandy akory
28/08/2017 admintriatra Songandina 0
Tsy nisoroka ny minisi-panjakana sady filohan’ny antoko HVM amin’ny fanakianana tsy marina izay mandeha amin’ny haino aman-jery milaza fa fampielezan-kevitra ny fitokanana ireo zava-bita ataon’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao “famendrofendroana ny filazana fa tsy tokony hitokana zava-bita intsony ny Filoham-pirenena sy ny governemanta noho ireo asa vita; izay ilay hoe vaza hoy ny fomba fiteny any amin’ny faritr’i Mahajanga na hoe mananihany. Fitaka izany izay atao ankolaka hanerana ny fitondram-panjakana tsy hiasa” hoy hatrany Rivo Rakotovao. Betsaka tokoa hoy izy ny fanadroadroana amin’ izao fotoana izao ary eo ihany koa ny fanakorontanana, saingy ny fitondram-panjakana dia efa miroso hatrany amin’ny fampihavanana izay hiaraha-mahita ny fanendrena ireo mpikambana amin’ny fampihavanam-pirenena. Manoloana ireo resaka maro ireo dia nanindry mafy tokoa ny filohan’ny antoko HVM fa “miasa matoa mitokana zava-bita fa ireo izay miteny izany kosa dia mbola variana matory, ka tiany hitovy amin’izy ireo isika. Noho izany dia tokony ho mailo ny rehetra satria miasa isika ka tsy tokony ho voafitaka”. Ny zavatra rehetra izay atao hoy i Rivo Rakotoavao dia miompana betsaka hatrany amin’ny asa izay ilain’ny vahoaka sy hiandrasan’izy ireo ny mpitondra
Anisan’ny nasain’ny filohan’ny antoko HVM teny ihany koa mikasika ny fanovana governemanta ny faran’ny herinandro lasa teo, nambarany fa “matoa manao izany ny Filoham-pirenena, ny fijerinay olona ho entina an’izany dia hoe tiany ny hiakatra ambony kokoa. Manana ny heviny tanteraka izy ary misy ny teti-panorina ho entiny matoa manova. Ary matoa manova dia ho amin’ny tsaratsara kokoa izany fa tsy ho amin’ny ratsy mihitsy”. Ho azy hatreto dia ny fanatanterahana ny vina napetraky ny filohan’ny repoblika hatrany no tanjona, izay mandeha any amin’ny tombontsoam-bahoaka hatrany izany. Ny fanakianana sy ny tsikera tokoa dia misy hatrany amin’ny fandraisana andraikitra izay ataon’ny Filoham-pirenena saingy ny asa vita hatrany no tokony hojerena na dia eo aza ny fanoloana izay tanterahin’ny tompon’andraikitra ambony izay mahefa sy voalazan’ny lalàna fa manana zo hanatanteraka izany.